Qabsashada Baraawe oo u horseeday Muqdisho inay ciidamada DF Somalia.. |
Qabsashada Baraawe oo u horseeday Muqdisho inay ciidamada DF Somalia..
Muqdisho (Somalimedia Online) – Iyadoo muddo dhowr bilood ah ay Magaalada Muqdisho ka caaganeyd Weeraro ismiidaamin iyo dilalka qorsheysan, ayaa waxaa iminka muuqaneysa Habacsanaan dhanka Ciidamada Dowlada Federaalka ah ee Somalia.
Habacsanaanta Ciidamada ayaa waxa ay suuragalisay in muddo Seddex maalin gudaheeda uu Magaalada Muqdisho ka dhaco laba qarax oo loo adeegsaday gawaari nooca raaxada ah, kuwaasi oo ka kala dhacay Xamar-Weyne iyo nawaaxiga Isgooyska Sayidka gaar ahaan Oromo Caffe.
Qaraxyadaani ayaa waxa aysan muujineyn soo kabashada Maleeshiyaadka xagjirka ah ee Alshabaab, balse caddeynaya in farxadda ay ka badatay dowladda, sidaas darteedna ay is dhigatay, ayada oo aaminsan in Shabaab ay wiiqantay.
Ciidamada Ammaanka ee taagan wadooyinka Magaalada Muqdisho, ayaa lagu dhaliilaa inaysan ka soo bixin howlaha loo igmaday, mana baaran inta badan gaadiidka markii laga reebo wajiga wadayaasha gaadiidka oo ay ku mashquulaan ama ay eegaan oo kaliya.
Waxaa Magaalada Muqdisho weli ku sugan Horjoogayaal ka tirsan Maleeshiyada kuwaasi oo aan heysan Fursado ay ku fuliyaan falal amniga qalqal galinaaya, iyadoona ay muuqaneyso in Habacsanaanta Ciidamada wadooyinka la soo dhoobo oo aan si hufan u gudan Howshooda ay fursad u noqon karto Maleeshiyada.
Dhanka kale, Labada weerar ee Seddexda maalin gudahooda ka dhacay Muqdisho, ayaa waxa ay kusoo beegmeysaa, iyadoo Maleeshiyada laga sifeeyay inta badan Dalka, markii laga reebo deegaano ay kamid yihiin Heliwaa ee Muqdisho.